Habka ugu fiican in Gadzhiyev OS in baabuur adag weyn oo cusub
> Resource > Utility > Jidka Best in Gadzhiyev OS si weyn Hard Drive
Waa arrin xanuun ah si ay kor aad OS lagu rakibay gaari ku adag, sababtoo ah aadan rabin in dib aad nidaamka qalliinka si fiican u socda iyo waxa loo baahan yahay aqoonsiga Windows oo muhiim ah, iskaba daa waqti dheer qaatay waxa ku saabsan. Sidaas habka ugu fiican ee aad dhaqaajiso OS jira in aad baabuur cusub oo ka weyn adag tahay in la Gadzhiyev. Cloning caawin kara inuu u dhaqaaqo dhammaan waxyaabaha aad ku wadid adag gebi ahaanba si aad baabuur cusub, oo ay ku jiraan nidaamka qalliinka, faylasha, barnaamijyada iyo dhammaan gaar ah.
Sida loo Gadzhiyev OS in drive weyn adag
Si Gadzhiyev oo aad OS, waxaad u baahan tahay nidaam gurmad qalab. Halkan waxaad isku dayi kartaa Wondershare LiveBoot Boot CD , taas oo kaa caawin kara in aad Gadzhiyev disk oo dhan ama maqaal qoruhu in aad u baahan tahay in gurmad la kaliya 1 click.
Wondershare LiveBoot bixisaa Downlaods CD / USB, oo aad ku helayso deegaanka ah gebi ahaanba saafi ah in ay gurmad nidaamka qalliinka nadiif ah ama ku jira oo dhan drive. Geli CD ama furaysto ee USB ah in aad PC, bilowdo your computer oo ay doortaan in ay kabaha ka LiveBoot.
Step2. Bilow inaad Gadzhiyev OS
Ka dib is geliyey Windows, LiveBoot waxaa si otomaatik ah bilaabi doonaa. Markaa waa inaad aadaa "Management Disk". Halkan waxa aad ka arki kartaa "Disk Dhan Gadzhiyev" iyo "Gadzhiyev oo ka mid ah Barzakh," dhanka bidix. Haddii aad rabto in aad Gadzhiyev content drive adag oo dhan, waxaad dooran kartaa "Disk Dhan Gadzhiyev", ama waxaad dooran kartaa "Gadzhiyev oo ka mid ah Barzakh," in ay gurmad Risaalo kaliya meesha OS rakibay.
Waxaad si toos ah Gadzhiyev kartaa drive jir in aad baabuur cusub oo ay adag tahay haddii aad si aad u computer la xiran kartaa qalabka xidha la xiriira, ama ugu horeysa ee aad u Gadzhiyev karaa in disk dibadda, ka dibna u Gadzhiyev oo dib u wadid aad u adag marka aad bedelay mid ka mid ah jirka waxaa la. Soo qaado sida ugu haboon adiga.
Sidoo kale, in aad image dooran kartaa wadid aad u adag la "kaabta Disk". Waxaa awoodo gurmad content wadid aad u adag sida file ah image. Ka dibna waxaad u soo celin kartaa si aad baabuur cusub oo adag.